Ukuya ngokuBukhoma ngoKhuseleko kunye neNkqubo yoLawulo lweThala leeNcwadi | Iinkonzo zeendaba zeWire
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Ukuya ngokuBukhoma ngoKhuseleko kunye neNkqubo yoLawulo lweThala leeNcwadi
Ukuya ngokuBukhoma ngoKhuseleko kunye neNkqubo yoLawulo lweThala leeNcwadi
Khawufane ucinge ngekamva lolawulo lolwazi
Abasebenzi be-CLC bonwabile ngamathuba athe avuleka ngokuphunyezwa kwenkqubo yabo entsha yolawulo lwamathala eencwadi!
Ithala leencwadi ayibobunewunewu kodwa yenye yezinto eziyimfuneko ebomini. ”
IiSoftlink Information Centres (IC) zivuyisana neThala leeNcwadi leCentral Land Council eOstreliya yeNgingqi yase-Australia ngokusungulwa ngempumelelo kwe U khu luleko kunye nenkqubo yolawulo lwethala leencwadi le-Orbit.
Ngokusekwe eAlice Springs, iBhunga loMhlaba eliyiCentral limele abantu Bomthonyama e-Australia esembindini kwaye liyabaxhasa ukuba baphathe umhlaba wabo, bawasebenzise kangangoko amathuba abawabonisayo kunye nokukhuthaza amalungelo abo. Funda nzulu malunga neBhunga laMazwe akuMbindi apha.
Ithala labo leencwadi lihambisa izibonelelo kunye neenkonzo kubasebenzisi bendabuko abahlala kulo mmandla. Owe-2020 ibingunyaka wokugxila ekukhetheni nasekumiliseleni inkqubo yolawulo lwamathala eencwadi entsha. ISoftlink IC wayevuya xa bekhetha inkululeko kunye ne-Orbit njengezona zisombululo zilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zabo.
Olu suku “lokuya kuphila” lwalulindelwe ngabasebenzi be-CLC. Ngelixa besonwabela izitya ezimnandi zamacherry kunye neekhekhe zoKhuseleko, amashumi amathandathu anesihlanu ababekhona banikwa isishwankathelo sephepha lasekhaya lasekhaya elincomekayo, ikhathalogu yokungena kwinqanaba lokufunda nokubhala, kunye nokusebenziseka okulula kokusebenziseka kwababolekayo abanokujonga phambili kuko.
Iqela lokuphumeza bonwabile ngamathuba okubonelelwa ngu-Liberty kunye ne-Orbit,
“Sinovuyo olukhulu ngokuba nenkqubo yethala leencwadi ephucuke kakhulu ekudala ikho ukuza! Abasebenzi bayakonwabela ukusebenzisa iNkululeko ngenxa yeempawu zayo ezininzi kunye nokukhululeka abasebenzisi bethu bokugqibela abanokuhamba ngayo. Sikwazile ukwenza ngokulula imibala kunye nolwakhiwo ukwenza iphepha elinomdla kwilayibrari, esinokuthi sikwazi ukuzibandakanya nomfundi kwaye sibarhwebeshe ukuba bakhangele ezinye. Oko kwasungula 'ukugcwala' kunye nezicelo zonyuke kakhulu! "
Bakwaphawule ukuba abasebenzi bethala leencwadi bathanda ngokukodwa ukuKhangela okuZisayo okuzisa izixhobo ezongezelelweyo kwi-intanethi kwisaziso sabasebenzisi bamathala eencwadi.
I-Orbit iya kuphehlelelwa ngokusesikweni kwiRanger Camp ngoMatshi kwaye inyuselwe njengo 'Ukuzisa ulwazi kuBush'.
I-COO yethu, uSarah Thompson, wayephoxekile kuba angazukubakho ngokusesikweni ngoDisemba ngobuqu ngenxa yezithintelo zokuhamba zeCovid-19.
“Bekumnandi kakhulu ukuya kumhla wokuphila ngobuqu. Ukudibana nabantu nokuthetha nabo malunga nenkululeko yeyona nto ndiyithandayo emsebenzini wam. Ukuphoxeka kokungabikho kwalapho kwaba mandundu kuba ndiphoswe yikeyiki! ”
Sonke eSoftlink IC sonwabile ukwamkela iThala leeNcwadi leCentral Land Council kusapho lwaseLiberty. Sijonge phambili kubudlelwane obunomvuzo!